သင်ခန်းစာ အမှတ် (၆) ခရစ်တော်သည် အပျိုကညာဝမ်းမှ မွေးဖွားခြင်း
ခရစ်ယာန်အသိုင်းအ၀ိုင်းတွင် ခရစ်တော်သည် အပျိုကညာဝမ်းမှ မွေးဖွားသည်ဟူသော ကိစ္စသည် လွယ်လင့် တကူလက်ခံသောကိစ္စတရပ်သာဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ကနဦးအသင်းတော်ကပင်ထိုအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက် ၍ တိုက်ရိုက်ငြင်းခုံခဲ့ကြပါသည်။ ဂျူးခရစ်ယာန်အနွယ်ဖြစ်သော Eborites များက ငြင်းပယ်ပြီးခရစ်တော်၏ဘုရားဖြစ် ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အပျိုကညာဝမ်းမှ မွေးဖွားခြင်းသည် မရှိမဖြစ်မဟုတ်ကြောင်းပြောပါသည်။ Gnestic ဂိုဏ်းဝင်များ အထူးသဖြင့် Cerinthus ၏တပည့်များကမူ ယေရှုနှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံယူစဉ် ခရစ်တော်ဝင်လာပြီး လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် သေခံစဉ် ယေရှုထံမှ ခရစ်တော်ထွက်ခွာသွားသည်ဟုဆိုပါသည်။ အခြား Gnostic များကမူ ငြင်းပါယ်ထားပါသည်။
အပျိုကညာဝမ်းမှ မွေးဖွားသည့်အယူအဆသည် ရောမ။ ဂရိသို့မဟုတ် ဗာဗုလုံဒဏ္ဍာရီမှဆင်းသက်လာခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်နေသူအများအပြားရှိနေပါသည်။ အပျိုကညာဝမ်းမှ မွေးဖွားခြင်းယုံကြည်ချက်ကို တိုက်ခိုက်နေ သူအများအပြားယခုခေတ်တွင် ရှိနေပါသဖြင့် ဧ၀ံဂေလိတရားတော်ကို ယုံကြည်၍ ကာကွယ်လိုသူတို့သည် ခရစ်ယာန် ဘာသာ၏အခြေခံနှင့် မရှိမဖြစ်သောယုံကြည်ချက်ဖြစ်သည့် အပျိုကညာဝမ်းမှ မွေးဖွားခြင်းယုံကြည်ချက်ကို ကာကွယ် ရန်ပြင်ဆင်ထားရပါမည်။
အပျိုကညာဝမ်းမှ မွေးဖွားခြင်းသည် လူဥာဏ်ဖြင့် မမီသောဘုရားသခင်နှင့် စပ်ဆိုင်သည့်နက်နဲသော အရာ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်၏ဘုရားဖြစ်ခြင်း၊ သမ္မာကျမ်းစာ၏မှန်ကန်မှုလမ်းညွှန်နိုင်မှုနှင့် ကယ်တင်ခြင်းစီမံကိန်းကြီး တစ်ရပ်လုံးသည် အပျိုကညာဝမ်းမှ မွေးဖွားခြင်းနှင့် တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်နေပါသည်။ အကယ်၍ ခရစ်တော်သည် ထူးဆန်းအံ့သြဘွယ်ကောင်းအောင်သန့်ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော်အားဖြင့် အပျိုကညာဝမ်း၌ ပဋိသန္ဓေတည်တော်မမူခဲ့ပါ လျှင် ကိုယ်တော်သည် သာမန်လူသားကဲ့သို့ လူမျိုးစေ့မှ မွေးဖွားပြီး၊ အပြစ်မျိုးဆက်ဖြစ်သော အာဒံအမျိုးအနွယ်သာ ဖြစ်နေပါမည်။ ထိုသို့ဖြစ်လျှင် ကိုယ်တော်၌ ကမ္ဘာမတည်မရှိမှီရှိနေခြင်း မရှိသည်သာမက၊ ဘုရား၏သားတော်လူဇာတိ ကိုခံယူခြင်းအပြည့်အ၀ မဖြစ်နိုင်ချေ။ အပြစ်ကင်းမဲ့သောသိုးသူငယ်လည်း မဖြစ်နိုင်။ အပြစ်သား၏ကယ်တင်ရှင်လည်း မဖြစ်နိုင်ပါ။ အပျိုကညာဝမ်းမှ မွေးဖွားခြင်းသည် ခရစ်တော်၏ ဧ၀ံဂေလိတရား၏အဓိကနှင့် မရှိမဖြစ် အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းဖြစ်လျက်ကျွန်ုပ်တို့၏ ကယ်တင်ခြင်းနှင့် မျှော်လင့်ခြင်းသည် ထိုအရာ၌ တည်မှီနေပေသည်။ ဤအချက် သည် အလွန်အရေးကြီးသည်ဖြစ်သောကြောင့် အပျိုကညာဝမ်းမှ မွေးဖွားခြင်း၏ အထောက်အထား သက်သေ သာဓကများ ကို ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်များမှ မွေးဖွားခြင်း၏ အထောက်အထားသက်သေသာဓကများကို ယုံကြည်သူ ခရစ်ယာန်များ အနေဖြင့် အပိုင်အနိုင်လေ့လာထားရပါမည်။ အပျိုကညာဝမ်းမှ မွေးဖွားခြင်းကို ငြင်းပယ်ခြင်းသည် ကျမ်းစာကို ပုန်ကန်ခြင်း၊ တမန်တော်၏လက်ထက်မှစ၍အသင်းတော်၏ တဆက်တည်းသော သက်သေခံချက်ကို ဆန့်ကျင်ခြင်း၊ လူဇာတိခံယူခြင်းဆိုင်ရာ ယုံကြည်ချက်ကိုပေါ့ပျက်စေခြင်း၊ ခရစ်တော်သည် လူသား သာမည ဖြစ်သည် ထူးခြားမှုမရှိဟု ယူဆ နသောဆန့်ကျင်ဘက်အတွေးအခေါ်သမားများအောက်သို့ လက်နက်ချ အညံ့ခံခြင်းသာ ဖြစ်သည်”ဟူ ( )ကဆိုပါသည်။
အနန္တတန်ခိုးရှင်ဖြစ်သော ဘုရားရှင်အနေဖြင့် လူ့ဇာတိခံယူခြင်းသည် ခက်ခဲသောအရာမဟုတ်ပဲ သာမန်လူ သားတစ်ဦးအနေဖြင့် ဘုရားဇာတိကို ခံယူနိုင်ခြင်းမှာမူ လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပေ။
သင်ခန်းစာကို ခေါင်းစဉ် (၄)မျိုးဖြင့် တင်ပြပါမည်။ ၄င်းတို့မှာ - အခြေခံရည်ရွယ်ချက်၊ ပရောဖက်တို့၏ ကြိုတင်ပြောဟောချက်၊ ကမ္ဘာမတည်မရှိမီ ခရစ်တော်ရှိနေတော်မူခြင်းနှင့် အထောက်အထားများဖြစ်ပါသည်။
က။ ရှင်မာကု၊ ရှင်ယောဟန်နှင့် ရှင်ပေါလုတို့ရေးသားထားသော မှတ်တမ်းများတွင် တစ်စုံတစ်ရာ ဖော်ပြထားခြင်းမပြုဘဲ ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေခြင်းမှ ပေါ်ပေါက်လာသော အငြင်းပွားမှု။
(၁) အဖြေ။ ဤအချက်ကို လျှို့ဝှက်ချက်အဖြစ် သိမ်းမထားပါ။
(က) ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်၏ မိခင်ဖြစ်သူ ဧလိရှဖက်သည် မယ်တော်မာရိအား “အကျွန်ုပ် သခင်၏ မယ်တော်”ဟု နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်။ (လု ၁း၄၃)
(ခ) သိုးထိန်းတို့သည် သူငယ်ကိုမြင်ရသောအခါ … “ခရစ်တော်အရှင်”ဖြစ်ကြောင်းသိရှိ၍ ၀မ်းမြောက်ကြပါသည်။ (လု ၂း၂၀)
(ဂ) ဗိမာန်တော်၌ရှိနေကြသောသူအများတို့သည် ရှုမောင်နှင့် အန္နတို့က ယေရှုကို “ထာဝရ ဘုရား၏ခရစ်တော်”ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားချက်ကိုကြားသိထားကြပါသည်။ (လု ၂း၂၅-၂၈)
(ဃ) ယော ၈း၁၄၊ ၂၃၊ ၅၈ ကဲ့သို့သော ကျမ်းချက်များကို ထောက်လျှင် ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင် မိမိ၏မူလနှင့် မွေးဖွားခြင်းကိုသိရှိထားကြောင်း ထင်ရှားစွာနေပါသည်။
(င) မယ်တော်မာရိနှင့် ယောသပ်တို့သည် ခရစ်တော်၏ စာရိတ္တနှင့် ၀ိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အတွေ့ အကြုံများကို လက်ဆင့်ကမ်းခဲ့ကြပါသည်။ အထူးသဖြင့် ရင်းနှီးသော မိတ်ဆွေများ ဖြစ်သည့် ရှုမောင်၊ အန္န၊ ဧလိရှဖက်နှင့် အခြားပုဂ္ဂိုလ်များအား ပြောပြခဲ့သည်မှာ သေချာလှ ပါသည်။
(၂) ရှင်မာကုရေငုံနုတ်ပိတ်နေခြင်း။ စာရေးသူ၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို သိရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။ ရှင်မာကု သည် ခရစ်တော်၏အမှုတော်ဆောင်ခြင်းများကို အဓိကထား၍ ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဗတ္တိဇံယောဟန်၏ နှစ်ခြင်း ပေးခြင်းနှင့် အစပြုခဲ့ပါသည်။ ရှင်မာကုသည် ဧ၀ံဂေလိကျမ်းကို ရေးသားရာတွင် ယေရှုအား “ဘုရားသခင်၏သားတော် ယေရှု”ဟူသော စကားဖြင့် အစပြုခဲ့ပါသည်။ (မာ ၁း၁) ခရစ်တော်၏ငယ်စဉ်နှင့် ရှေ့ပိုင်းကိုဖော်ပြခြင်းမပြုခဲ့ပါ။ ရှင်မာကု ခရစ်ဝင်ကျမ်းသည် ရှင်မဿဲနှင့် ရှင်လုကာကိုရေးပြီးမှ ရေးခြင်းဖြစ်၍ ထိုကျမ်းများတွင် မည်သို့ဖော်ပြထား သည်ကို သိထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ထိုအကြောင်းများကို ထပ်ရေးရန်သော်လည်းကောင်း ငြင်းပယ် ရန် သော်လည်း ကောင်း မတွေ့ရှိ၍ မဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
(၃) ရှင်ယောဟန်ရေငုံနုတ်ပိတ်နေခြင်း။ သမ္မာကျမ်းစာတွင် ပါဝင်သော စာများအနက် ရှင်ယောဟန် ရေးသားထားသောစာများသည် နောက်ဆုံးရေးသားသော စာများဖြစ်ပါသည်။ ဤစာများ ရေးချိန် တွင် ရှင်ယောဟန်သည် ရှင်မဿဲနှင့် ရှင်လုကာကို ရေးသားသောကျမ်းစာများကို ဖတ်ရှုခဲ့ရသည် သာမက၊ ခရစ်ယာန်အသင်းတော်များ တွင် ခရစ်တော်သည် အပျိုကညာဝမ်းမှ မွေးဖွားခဲ့သည် ဟူ သောအချက်သည် အသင်းတော်များယုံကြည်ချက်အဖြစ် ရပ်တည်နေပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ထို အချက် များကို ငြင်းပယ်ခြင်းတစ်စုံတစ်ရာမပြုလုပ်ခဲ့ပါ။ မယ်တော်မာရိသည် သေသည့်တိုင်အောင် ရှင်ယောဟန်၏ အိမ်၌နေထိုင်ခဲ့ကြောင်း သတိပြုသင့်ပါသည်။ (ယော ၁၉း၂၆) ၀မ်းမြောက်ဘွယ် ဧ၀ံဂေလိသတင်းတော်နှင့်ပတ်သက်၍ ဝေငှပြောဆိုကြသည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်ကြပါသည်။ ရှင်ယောဟန် သည် အပျိုကညာ၏ ၀မ်းမှမွေးဖွားခြင်းကို ငြင်းပယ်ကြသော ဆန့်ကျင်ဘက်များ၏ တပည့်ဂိုဏ်းဝင်များကပြောသည် ယေရှု၏သာမန်မွေးဖွားခြင်းများတို့ကို ဆန့်ကျင်ဟောပြောခဲ့ ပါ သည်။ ယော ၁း၁၃ သည် ခရစ်တော်၏ဖွားမြင်ခြင်းကိုရည်ညွှန်းသည်ဟု ယူဆထားသူ အမြောက် အများရှိပါသည်။ ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းခံရသော ယုံကြည်သူများသည် ဘုရားသခင်ဖြစ်ပွားစေသည် မှန်လျှင် ခရစ်တော်သည်လည်း ဘုရားသခင်ဖြစ်ပွားစေတော်မူသော သူဖြစ်ပါသည်။ ယော ၃း၅-၆တွင် သခင်ယေရှုက “ဇာတိပကတိမွေးသောအရာသည် ဇာတိပကတိ ဖြစ်၏။ ဒုတိယမွေးခြင်း ကို ခံရမည်”ဟု မိန့်ကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ယေရှုသည် ဇာတိပကတိ အားဖြင့် မွေးဖွားခဲ့ပါမူ၊ သူသည်လည်း အပြစ်သားဖြစ်၍ သူကိုယ်တိုင်ဒုတိယမွေးဖွားခြင်း ခံယူ ရန်လိုအပ်ပါသည်။
(၄) ပေါလုရေငုံနုတ်ပိတ်နေခြင်း။ ပေါလုသည် မယ်တော်မာရိအကြောင်းကိုပင်ဖော်ပြခြင်းမရှိပါ။ စာရေး သူ၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုသိရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။ လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် အသေခံတော်မူ၍ သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီး ဘုန်းတော်ထင်ရှားလျက် နောက်တစ် ဖန်ပြန်လည်၍ကြွလာတော်မူအံ့သော သူ၏အကြောင်းကိုထင်ရှားစွာ ဟောပြောသက်သေခံရန်မှာ ပေါလု၏ဆန္ဒဖြစ်ပါသည်။ အပျိုကညာ ၀မ်းမှမွေးဖွားခံတော်မူခြင်းသည် ရှေးဦးခရစ်တော်တို့၏ ယုံကြည်ချက်ဖြစ်၍ ပေါလုသည် ငြင်းပယ် ထောက်ပြခြင်းမပြုပါ။ ခရစ်တော်၏အသက်တာ၊ ပြုတော်မူသောအမှု၊ အသေခံတော်မူခြင်း၊ သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်းတို့ကို ထောက်၍ လူသားအဖြစ်ခံယူတော်မူကြောင်း အထောက်အထားသည် ပေါလုအတွက် ခိုင်လုံနေပြီးဖြစ်ပါသည်။ ရှင်လုကာသည် ရှင်ပေါလုနှင့် နှစ်ပေါင်းများစွာ သာသနာပြုခရီးအတူထွက်ခဲ့ကြောင်းကို သတိပြုရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသူနှစ် ယောက်အတူသွားလာနေစဉ်အပျိုကညာဝမ်းမှ ဖွားမြင်ခြင်းကို မပြောပဲနေကြမည်မဟုတ်ပါ။
ပေါလုသည် အပျိုကညာဝမ်းမှ မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကို ရေးသားခြင်းမပြုခဲ့သော်လည်း သူ၏ ရေးသားချက်များတွင် ခရစ်တော်နှင့်ပတ်သက်၍ -
(က) “ဒုတိယလူမူကား ကောင်းကင်ဘုံကဖြစ်တော်မူသောသခင်ဖြစ်သတည်း”
(ခ) “လူကဲ့သို့သော ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူကြောင်း” မိမိစိတ်သဘောအတိုင်း လူအဖြစ်ကို ခံယူတော်မူကြောင်း (ဖိ ၂း၅-၈)
(ဂ) အပြစ်နှင့် ပြည့်စုံသောဇာတိပကတိ၏သဏ္ဍာန်ကိုဆောင်သော မိမိ၏သားတော်
(ဃ) မိန်းမ၏၀မ်း၌ ပဋိသန္ဓေယူ၍ …ဖွားမြင်ရသော သား (ဂလာ ၄း၎-၅)
မှတ်ချက် ။ ။ မဿဲ ၁၁း၁၁၊ လုကာ ၆း၂၈၊ စသည်များသည် “မိန်းမမှဖွားမြင်သူတို့ကို ရည်ညွှန်းထားပါသည်။ ပေါလုသည် ရောမနှင့် ဂလာတိသြ၀ါဒစာတို့တွင် အခြားဝေါဟာရကို အသုံးပြုထားပါသည်။ ဖွားမြင်ခြင်းအစား အပြစ်ခံယူသည်ကို အသုံးပြုထားပါသည်။
(ခ) အပျိုကညာဝမ်းမှ မွေးဖွားခြင်းသည် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် ဖော်ပြထားသော ပရောဖက်ပြုထားခြင်း သို့မဟုတ် တစ်ပါးအမျိုးသားတို့၏ ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်များမှ ယူလာခြင်းဖြစ်သည်ဟူသော ယူဆချက် -
(၁) ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှ ပရောဖက်ပြုထားခြင်းကိုဒဏ္ဍာရီပုံပြင်သဖွယ် မှတ်ယူထားသူမျာအတွက် အဖြေ-
(က) အဓိကဝေဖန်ချက်သည် ဟေရှာယ ၇း၁၄တွင် ပါသော အပျိုကညာဟူသောစကားမှာ "Almah" ဖြစ်ပြီး၊ အိမ်ထောင်မပြုရသေးသောမိန်းမငယ်ဟုဝေဖန်ကြပါသည်။ ထိုစကားသည် အပျိုစင်ဖြစ်ရန်မလိုပါဟု ဆိုကြသည်။ သို့ရာတွင် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် ဤစကားလုံးကို (၆)ကြိမ်မှအသုံးပြုခဲ့ပြီး အပျိုကညာဟူသောအဓိပ္ပါယ် ပင်ဖြစ်ပါသည်။ "Almah" ကိုမှားယွင်းမှုပြုပြီးသော အမျိုးသမီး၌ မည်သည့်အခါမှ မသုံးခဲ့ပါ။ သို့ရာတွင် ခရစ်တော် ကြွလာသောကာလ၌ ထိုစကားသည် မေရှိယကြွလာခြင်းနှင့် စပ်ဆိုင်မည်ဟု ယူဆသူဂျူးလူမျိုး၊ ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်များ တစ်ဦးမျှမရှိ ခဲ့ပါ။ "Almah"၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ အိမ်ထောင်မပြုဘူးသော မိန်းမငယ်ကိုဆိုလိုသည်။
(၂) တစ်ပါးအမျိုးသားတို့၏ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်မှ မွေးစားခဲ့ယူခြင်းအယူအဆများ-
(က) ရောမ၊ ခေါမနှင့် ဗာဗေလုံရှေးဟောင်းဒဏ္ဍာရီပုံပြင်များတွင် သာမန်မဟုတ်သော ထူးဆန်း သည့်မွေးဖွားခြင်းအမြောက်အမြားတွေ့နိုင်ပါသည်။
(ခ) ရှေးဦးအသင်းတော်ခေါင်းဆောင်ကြီးများသည် အပျိုကညာဝမ်းမှဖွားမြင်တော်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းထုတ်စရာရှိလျှင် တစ်ပါးအမျိုးသားတို့ကသာထုတ်ကြရန်ခံယူထား သည်။ အကြောင်းမှာ ထိုသူတို့၏ ဒဏ္ဍာရီများတွင် ထိုသို့သော မွေးဖွားခြင်း များစွာရှိခဲ့ခြင်း ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ နတ်ဘုရားနှင့် နတ်ဘုရားမတို့ မှမွေးဖွားခြင်း။ ရှေးဦးအသင်းတော် ခေါင်းဆောင်များသည် ထိုကဲ့သို့ အရာများကိုလုပ်ဇာတ် သက်သက်အဖြစ်လက်ခံထားပါ သည်။
(၁) Ceasar Augustus ကသာ ဘုရင်သြရတ္တုသည် မိမိမွေးဖွားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အပိုလိုနတ်ဘုရားသည် သူ၏ဖခင်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။
(၂) Alexander the Great သည်လည်း သူသည် နတ်မင်း၏သားဖြစ်ကြောင်း၊ သူ၏ မိခင်သည်မြွေကြီးအသွင်ဆောင်သော နတ်မင်းနှင့်အတူနေပြီးနောက်ဖွားမြင် လာခြင်းဖြစ်ကြောင်း စသည်ဖြင့် သတင်းဖြန့်ခဲ့ပါသည်။
(ဂ) တပါးအမျိုးသားတို့၏ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်များသည် သမိုင်းအထောက်အထားခိုင်လုံမှု မရှိပါ။ ဧ၀ံဂေလိတရားနှင့် စပ်ဆိုင်သောအဖြစ်အပျက်များသည် ပုဂ္ဂိုလ်၊ အချိန်၊ အဖြစ်အပျက်၊ နေရာ၊ ရက်စွဲမှစ၍ အချက်အလက်အပြည့်အစုံရှိပါသည်။ လူတို့၏ ဒဏ္ဍာရီများသည် မရေမရာဖြစ်သည်သာမက၊ ပုံစံမရှိ၊ အချိန်မရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
(ဃ) ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်များတွင် ခရစ်တော်၏ အပျိုကညာဝမ်းမှမွေးဖွားခြင်းနှင့် နှိုင်းပြနိုင် သောပုံပြင်၊ နှိုင်းယှဉ်နိုင်သော ၀တ္တုမရှိပါ။ လူသားမျိုးနွယ်စုတစ်ရပ်လုံးအား အပြစ်မှကယ်တင်ရန် လောကသို့ အပျိုကညာဝမ်းမှမွေးဖွားခြင်းနည်းလမ်းကို ရွေးချယ်သောဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်နှင့် ပြိုင်နှိုင်းနိုင်သောသူမရှိပါ။
(င) အရှေ့တိုင်းမှလာသော ဒဏ္ဍာရီများသည် အပျိုကညာဝမ်းမှ မွေးဖွားခြင်း အကြောင်းလုံးဝမရှိပါ။
(စ) တပါးအမျိုးသားတို့၏ ပုံပြင်များသည် ကနဦးခရစ်ယာန်များအတွက် တီထွင်မှု တရပ်သာဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ကျမ်းစာရေးသူများသည် ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်များထဲမှ ယူ၍ရေးသည်ဟုဆိုခြင်းမှာ ယုတ္တိမရှိပါ။
မှတ်ချက်။ ကနဦးအသင်းတော်လူကြီးများနှင့် အသင်းတော်ယုံကြည်ချက်ကိုခုခံကာကွယ် သူ များသည် ခရစ်တော်၏မေရှိယဖြစ်ခြင်းနှင့် အပျိုကညာဝမ်းမှမွေးဖွားခြင်းတို့ကို ဖော်ထုတ်ရာတွင် ရှေးပရောဖက်တို့၏ ကြိုတင်ဟောပြောချက်များကို အမှီပြုခဲ့ကြပါသည်။ ဝေဖန်သူများသည် ဤနည်းလမ်းကို အပြင်းအထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြလျှက် အပျိုကညာဝမ်းမှမွေးဖွားခြင်းသည် နောက်မှ ထပ်ဖြည့်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပင်လျှင် ထိုပရောဖက်တို့၏ ကြိုတင်ဟော ပြောချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ၀မ်းမြောက်စွာအားထားနေရဦးမည်ဖြစ်ပါသည်။
(က) ကမ္ဘာဦး ၃း၁၅။ သင်နှင့် မိန်းမကို၎င်း၊ သင်၏အမျိုးအနွယ်နှင့် မိန်းမ၏အမျိုးအနွယ်ကို ၄င်း၊ ငါသည်ရန်ငြိုးဖွဲ့စေမည်။ မိန်းမ၏အမျိုးသည်စာတန်၏ခေါင်းကိုချေလျှက် ကျွန်ုပ်တို့ အတွက်ကယ်တင်ခြင်းကိုဖြစ်စေမည်။
(ခ) ဟေရှာ ၇း၁၄။ “သတို့သမီးကညာသည် ပဋိသန္ဓေစွဲယူ၍သားယောက်ျားကို ဘွားမြင် လတ္တံ့” ဤကတိတော်ကို “ဒါဝိဒ်အမျိုးသား”တို့အား ပေးထားပါသည်။ (ငယ် ၁၃)။ မေရှိယသခင်သည် ဒါဝိဒ်မင်းမျိုးမှဖြစ်ရမည်။ (၂ရာ ၂း၁၆၊ ရော ၁း၃)
(ဂ) ဟေရှာ ၉း ၆-၇ ။ အပျိုကညာဝမ်းမှ မွေးဖွားခြင်းနှင့် ခရစ်တော်၏ဘုရားဖြစ်ခြင်းကို သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် မည်မျှအလေးပေးထေားသည်ကို သတိပြုသင့်ပါသည်။ “ငါတို့အဘို့ သူငယ်တော်ကိုပေးတော်မူ၏၊ ငါတို့အားသားကိုသနားတော်မူ၏” “သူငယ် တော်ယေရှုဖွားမြင်သည်။ သို့သော်ကောင်းကင်မှလာသောသားတော်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုနည်း တူ လု ၂း၁၁တွင်လည်း “ခရစ်တော်တည်းဟူသောကယ်တင်သောအရှင်သည် သင်တို့ အဘို့အလို့ငှာဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူသည်။ သို့သော် သခင်ခရစ်တော်ကြွလာတော်မူ သည်။
(ဃ) ဟေရှာ ၄၉း ၁-၅၊ ခရစ်တော်ကိုအမိဝမ်းထဲမှစ၍ ဖန်ဆင်းတော်မူလျှက်ခေါ်တော်မူသည်။ ခရစ်တော်သည် ကောင်းကင်နိုင်ငံမှဆင်းသက်၍ မယ်တော်မာရိ၏၀မ်း၌ ပဋိပန္ဓေစွဲတော် မူ၏။
(င) ယောသပ်သားကား ယေရှုဟု ဂရိကျမ်းစာထဲ၌ ဖော်ပြထားခြင်းမရှိ။
(စ) မ ၁း၂၂-၂၃ ထိုအကြောင်းအရာမူကား ထာဝရဘုရားသည် ပရောဖက်ဖြင့်ထားတော်မူ သော ဗျာဒိတ်တော်ပြည့်စုံမည့်အကြောင်းတည်း။
(ဆ) လု ၁း၃၅ “ထိုသန့်ရှင်းသောသားသည်လည်း ဘုရားသခင်၏သားတော်ဟုခေါ်ဝေါ် သမုတ် ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်။
(ဇ) အပျိုကညာဝမ်းမှမွေးဖွားခြင်း အတွေးအခေါ် တည်ဆောက်ရာတွင် ခိုင်ခန့်မှုရှိမည့်အ ကြောင်းကိုပရောဖက်တို့၏ဟောပြောချက်များကို နောက်ထပ် ထပ်ဖြည့်သည်ဟု ဝေဖန်သူ များကပြောထားပါသည်။ ထိုသူများအတွက်အဖြေမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
(၁) တမန်တော်တို့၏ ယုံကြည်ချက်ကိုမကျင့်သုံးမှီ အေဒီ ၁၀၀ခန့်ကပေါ်ခဲ့သော ယုံကြည်ချက်တွက် “သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့် မာရိတို့မှ မွေးဖွားသော” ဟုပါရှိပါသည်။
(၂) “ယုံကြည်ခြင်းစည်းမျဉ်း”ခေါ် ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာမခံမီ ၀န်ခံရသော ယုံကြည်ခြင်းတွင် ပုံစံအမျိုးမျိုးကွဲပြားခဲ့သော်လည်း အပျိုကညာဝမ်းမှမွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကို သဘောတူညီကြပါသည်။
(၃) အေဒီ ၁၀၀တွင် အသင်းတော်သည် ခရစ်တော်၏သေခြင်းဖြင့် ကိုယ်ခန္ဓာအား ဖြင့်ခွဲခွာပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း (၇၀)သာရှိပါသေးသည်။ ဧ၀ံဂေလိတရားတော်မှတ် တမ်းများလက်ဝယ်ရောက်ရှိလာသည်မှာနှစ်ပေါင်း (၃၀)မျှရှိနေပြီးဖြစ်သည်။ သာသနာကို ဦးဆောင်သူများ တစ်ယောက်နောက်တစ်ယောက် ပြောင်းလဲ လာခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ အသင်းတော်များသည် တစ်ပါးနှင့်တစ်ပါး ဆက်သွယ်မိ ပြီး ဖြစ်သည်။ အသင်းတော်တိုင်းသည် ယုံကြည်ချက်အားဖြင့် သန့်ရှင်းတည်တန့် ရေးနှင့် တမန်တော်တို့၏ သြဇာတည်မြဲရေးကို လိုလားနေကြပါသည်။ တမန် တော်ကြီးရှင်ယောဟန်သည် ဤခေတ်ကာလ တလျှောက်လုံး အသက် ရှင် လျက်ပင်ရှိနေပါသည်။ ထို့ကြောင့်ထိုခေတ်တွင် အခြေအမြစ် မရှိသော အယူ အဆ တစ်ခုကို အသင်းတော်သို့သွတ်သွင်းရန်မဖြစ်နိုင်၊ အပျိုကညာ ၀မ်းမှ မွေးဖွားခြင်းကို နောက်မှသွတ်သွင်းခြင်းမဖြစ်နိုင်။ ယုဒခရစ်ယာန်ဂိုဏ်းများ ဖြစ် သော Eblorites များနှင့် Gnostics များမှတစ်ပါး အခြားခရစ်ယာန် အသင်း တော်များက လက်ခံထားသည်ကိုထောက်လျှင် အပျိုကညာဝမ်းမှ မွေးဖွားခြင်း သည် ခိုင်မာသော အထောက်အထားရှိသည်ဟု ယူဆလက်ခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။
ခရစ်တော်သည် အပျိုကညာဝမ်းမှမွေးဖွားခြင်း ခံတော်မူခဲ့ကြောင်းအခိုင်ခန့်ဆုံးသော အထောက်အထားမှာ ကမ္ဘာမတည်မရှိမှီ တည်ရှိတော်မူခြင်းဖြစ်ပါသည်။
က။ မိက္ခာ ၅း၂၊ ထိုသခင်သည် ရှေးကပ်ကမ္ဘာမှစ၍ ပေါ်ထွန်းသော သခင်ဖြစ်၏။
ခ။ ဟေဗြဲ ၁၀း၅-၉ အိုဘုရားသခင် ကိုယ်တော်သည် ယဇ်နှင့် ပူဇော်သက္ကာ ကို အလိုတော် မရှိသည်ဖြစ်၍၊ အကျွန်ုပ်တို့အဘို့ ကိုယ်ခန္ဓာကိုပြင်ဆင်တော်မူပြီ။
ဂ။ ယော ၁၇း၅ “အိုအဘ၊ ဤကမ္ဘာမတည်မရှိမှီ အထံတော်၌ အကျွန်ုပ်ခံစားသော ဘုန်းအသရေ”
ဃ။ ယော ၁း၁၂-၁၄ ”အစအဦး၌ နှုတ်ကပတ်တော်ရှိ၏။ နှုတ်ကပတ်တော်သည်လည်း လူ့ဇာတိအဖြစ်ကိုခံယူ၍”
င။ ယော ၈း၅၇-၅၉ “အာဗြံဟံမဖြစ်မှီငါဖြစ်၏”
စ။ ကော ၁း၁၇။ “သားတော်သည် ခပ်သိမ်းသောအရာမဖြစ်မှီဖြစ်တော်မူ၍။
ဆ။ ဖိ ၂း၅-၈ “ထိုသခင်သည် ဘုရားသခင်၏သဏ္ဍာန်တော်နှင့် ပြည့်စုံတော်မူသည်ဖြစ်၍ လူကဲ့သို့သောအဖြစ်၌ ဖွားမြင်ခြင်းကို ခံတော်မူ၏။
ဇ။ ကြွလာတော်မူခြင်း။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဘာသာတရားမြောက်များစွာရှိသည်အနက် ထိုဘာသာတို့ကိုခေါင်းဆောင်တည်ထောင်ကြသော သူတို့အထဲတွင် ငါသည် ဘုရားသခင် ဖြစ်၍ လူတို့ကို အပြစ်မှကယ်တင်ခြင်းငှာ ငါလာသည်ဟု ဆိုသော ပုဂ္ဂိုလ်မှာ ခရစ်တော် တစ်ပါးတည်းသာရှိပါသည်။
၁။ ဟေဗြဲ ၁၀း၇-၉ “ခရစ်တော်သည် ဤလောကသို့ ကြွလာသောအခါ”
၂။ ယော ၁း၁၁ “သူသည် မိမိလူတို့ထံသို့ကြွလာသော်လည်း”
၃။ မာ ၁၉း၄၅ “မိမိအသက်ကိုစွန့်၍ လူများကိုရွေးခြင်းငှာ ကြွလာသတည်း”
၄။ ၁တိ ၁း၁၅ “ယေရှုခရစ်သည် အပြစ်ရှိသောသူတို့ကို ကယ်တင်ခြင်းငှာ ဤ လောကသို့ကြွလာတော်မူသည်”
၅။ ယော ၁၈း၃၇။ “သမ္မာတရားဘက်၌ သက်သေခံခြင်းငှာ ငါသည် မွေးဖွာခြင်းကို ခံ၍ ဤလောကသို့ကြွလာပြီ”
၆။ ယော ၆း၃၈-၅၁ “ငါသည်ကောင်းကင်မှဆင်းသက်” ခရစ်တော်သည် လူတို့ကို အပြစ်မှကယ်တင်ရန်မိမိစိတ်ဆန္ဒအလျောက် ကြွလာတော်မူခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤဆောင် ရွက်တော်မူခြင်းသည် မိမိသဘော၊ မိမိစိတ်ဆန္ဒ သက်သက်သာ ဖြစ်ပါသည်။ H.C.G MOULE
ခရစ်တော်အား အဘခမည်းတော်သည် ကောင်းကင်မှစေလွှတ်တော်မူ၍ ကြွလာ တော်မူ ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
၁။ ဂလာ ၄း၎-၅ “အချိန်ကာလစေ့သောအခါ သားတော်ကိုဘုရားသခင်သည် စေလွှတ်တော်မူ၏။
၂။ ယော ၃း၁၇ “လောကီသားတို့သည် ကိုယ်တော်အားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်မည်အကြောင်း (ဘုရားသခင်သည် သားတော်ကို ဤလောကသို့) စေလွှတ်တော်မူ၏။
၃။ ၁ယော ၄း၁၄ “လောကီသားတို့ကိုကယ်တင်သော သခင်ဖြစ်စေခြင်းငှာ၊ ခမည်း တော်သည် သားတော်ကို စေလွှတ်တော်မူသည်”
၄။ ယော ၂၀း၂၁ “ခမည်းတော်သည် ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူသည်နည်းတူ၊ သင်တို့ကို ငါစေလွှတ်သည်”
မှတ်ချက်။ ။ ဘုရားဖြစ်ခြင်းကိုလုပ်ယူ၍သော်လည်းကောင်း၊ ဖျက်သိမ်း၍သော် လည်းကောင်း၊ မပြုလုပ်နိုင်။ ခရစ်တော်သည် ယခုတွင် ဘုရားဖြစ် နေပါလျှင် ဘုရားအစဉ်ဖြစ်နေပါသည်။ ခရစ်တော်သည် လူသား အဖြစ်ဖွားမြင်တော်မူခြင်းသည် သူ့ဘ၀အစပြုခြင်းမဟုတ်။ လူ့ဘ၀ သို့ဝင်ရောက်ခြင်းသက်သက်သာဖြစ်သည်။ Dr. James orr
မှတ်ချက်။ ခရစ်တော်ဘုရားဖြစ်ခြင်းနှင့် ကမ္ဘာမတည်မရျှိမှီ တည်ရှိတော်မူခြင်း အတွက်ထူးဆန်းသောဖွားမြင်ခြင်းလိုအပ်ပါသည်။ သို့တည်းမဟုတ် သူသည်အပြစ်၌ သန္ဓေတည်၍ အခြားလူသားများကဲ့သို့ ပျက်စီး စေတတ်သော ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လျက်၊ ဘုရားဖြစ်ခြင်း၌ ဆက်လက်ရပ် တည်နိုင်မည် မဟုတ်ပေ။
ခရစ်တော်သည်အပျိုကညာဝမ်းမှ မွေးဖွားခြင်းခံတော်မူကြောင်းနောက်ထပ် အထောက်အထားနှင့် နောက်ဆုံးသက်သေများကို အောက်ပါအတိုင်း စာရင်းပြု နိုင်ပါသည်။
က။ အကယ်၍ မာရိသည် အကျင့်ပျက်ပြားသူဖြစ်ခဲ့ပါလျှင်၊ သူမအား သေဒဏ်စီရင်ပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ (မဿဲ ၁း၁၉)
ခ။ မာရိနှင့် ယောသပ်နှစ်ဦးလုံးသည် ဒါဝိဒ်မင်းမျိုးမင်းနွယ်များဖြစ်ကြပါ သည်။ အကယ်၍ ခရစ်တော်သည် ယောသပ်အားဖြင့်ဖွားမြင်ခဲ့ပါလျှင် ယေခေါနိအားဘုရားသခင်ပြုတော်မူသော ကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာရှိ၍ မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ မေရှိယဖြစ်လာမည်မဟုတ်ပါ။ (မဿဲ ၁း၁၁နှင့် ယေရမိ ၂၂း၂၄-၃၀)ယှဉ်ကြည့်ပါ။
ဂ။ ခရစ်တော်၏အပြစ်ကင်းမဲ့သော အသက်တာ၊ သမာရိုးကျမဟုတ် သော သေခြင်း၊ သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၊ သန့်ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာခြင်း၊ နောက်ထပ်တဖန်ကြွလာတော်မူ မည်ဖြစ်ကြောင်း ကတိတော်များသည် ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာကိုရေးသော ပုဂ္ဂိုလ်များအား ခရစ်တော်သည်ဘုရားစစ်စစ်ဖြစ်သည်ပါ အပြည့်အ၀ လက်ခံယုံကြည်စေပါသည်။
ဃ။ ကနဦးအသင်းတော်မှ စာရေးသူများ၊ ယုံကြည်ချက်ကို ကာကွယ်သူ များ (ပဌမနှင့် ဒုတိယရာစု) ဥပမာ Ignatius 110AD, Aristides 125AD, Justin Martyr, Iransus 175AD, Tertulliam 180 AD. တို့ သည် ခရစ်တော်အပျိုကညာဝမ်းမှ ဖွားမြင်ခြင်းသည်အသင်းတော် ၏ အခြေခံယုံကြည်ချက်ဖြစ်ကြောင်း ရေးသားမှတ်တမ်းတင်ကြပါ သည်။
င။ ရှင်မဿဲနှင့် ရှင်လုကာဝမ်းမြောက်ဘွယ်ဧ၀ံဂေလိကျမ်းများသည် တမန်တော်ခေတ်တွင်ရေးသားသော စာပေများ အစစ်အမှန်ဖြစ် လျက်၊ ကျွန်ုပ်တို့လက်ထဲသို့အရောအနှောမရှိရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်ပါ သည်။
အသင်းတော်အားရာစုပေါင်းများစွာ အထင်အမြင်မှားကြမည်ဆိုပါက ထိုအထင်မှားမှုသည် အကြီး မားဆုံးနှင့် အကျယ်ပြန့်ဆုံး အစဉ်သဖြင့် တိုက်ခိုက်မှုကြီးဖြစ်နေပါမည်။ ဝေဖန်ရေးသမားများ မကျော် လွှားနိုင်သော အချက်နှစ်ချက်ရှိပါသည်။
(၁) အပျိုကညာဝမ်းမှ မွေးဖွားတော်မူခြင်းသည် ခိုင်လုံသောအထောက်အထားမရှိပါလျှင် အဘယ်ကြောင့် ကနဦးအသင်းတော်၌ပင် ထိုအတွေးအခေါ်သည် ပေါ်ပေါက်နေပါသနည်း။
(၂) အပျိုကညာဝမ်းမှ မွေးဖွားတော်မူကြောင်းဖော်ပြချက်သည် သမိုင်းအထောက်အထားမရှိ ပါလျှက် အဘယ်ကြောင့် ထိုအယူအဆသည် စောစောကပင်ရှိနေပြီး လူတိုင်းတို့ကလက်ခံကြပါ သည်။
ဤလောကတွင် အပြစ်ဟူသောအရာသည် ရှိသည်မှန်လျှင်၊ အပြစ်မှကယ်ချွတ်ပိုင်သော၊ အပြစ်မရှိ သည့်ဘုရားရှိနေရန်လိုအပ်ပါမည်။ ထိုလိုအပ်ချက်အတွက် တစ်ခုတည်းသောဖြစ်နိုင်သည့်အရာ သည် ရှေးသန့်ရှင်းသူများလက်ခံယုံကြည်ကြသည်နှင့်အညီ ကိုယ်တော်သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်အားဖြင့် သန္ဓေတည်လျက် အပျိုကညာမာရိ၏၀မ်းမှဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူသည်”ဟူသော အချက်သာဖြစ်ပါသည်။ W.H Griffith Thomas.
မှတ်ချက်။ အမှန်မေးရမည့်မေးခွန်းမှာ “ခရစ်တော်ကို သင်သည် မည်သို့ယူဆထားပါသနည်း” အဖြေသည် ခရစ်တော်အကြောင်းကို နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်လေ့လာနိုင်မှုအပေါ်မူတည်ခြင်းမရှိ၊ သင်၏တုံ့ပြန်မှုနှင့် သင်စိတ်နှလုံးအသစ် ဖန်ဆင်းခြင်း ရှိမရှိပေါ်တွင်သာ မူတည်နေပါသည်။
အကယ်၍ သင်သည် ကိုယ်တော်အား မိမိ၏ကယ်တင်ပိုင်ရှင်နှင့် အရှင်သခင်အဖြစ်လက်ခံခြင်း မပြုရသေးလျှင် ယခုအချိန်သည် လက်ခံရမည့်အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ အခါမနှောင်းမှီလက်ခံပါ။
၁။ အပျိုကညာ ၀မ်းမှ မွေးဖွားတော်မူခြင်းကိုလေ့လာရခြင်းသည် အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးဆုံး ဖြစ်ပါသနည်း။ အကြောင်းပြချက်(၃) ချက်ဖေါ်ပြပါ။
၂။ အပျိုကညာ ၀မ်းမှ မွေးဖွားတော်မူခြင်း အယူအဆကိုဆန့်ကျင်သော အခြေခံဝေဖန်ချက်(၂)ချက်ကား အဘယ်သို့နည်း။
၃။ အပျိုကညာ ၀မ်းမှ မွေးဖွားတော်မူခြင်းသည် အသင်းတော်၏လျှို့ဝှက်ချက်မဟုတ်ကြောင်း၊ မည်သည့်ကျမ်းချက်များက ထောက်ပြပါသနည်း။
၄။ အောက်ဖေါ်ပြပါ ပုဂ္ဂိုလ်များသည် ခရစ်တော်အပျိုကညာမှ မွေးဖွားခြင်း ခံတော်မူခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ခိုင်မာသောအထောက်အထားကိုဖေါ်ပြပါ။
၅။ အပျိုကညာ ၀မ်းမှ မွေးဖွားတော်မူခြင်း အယူအဆသည် ဓမ္မဟောင်းခေတ် ပရောဖက်များ၏ ကြိုတင် ဟောပြောချက်များ ကိုလိုက်၍ မွေးစားခြင်းသာဖြစ်သည် ဟူသော အယူအဆကိုလည်း မည်သို့ ချေပမည်နည်း။
၆။ အပျိုကညာ ၀မ်းမှ မွေးဖွားတော်မူခြင်း အယူအဆသည် တပါးအမျိုးသားများ၏ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်များထဲမှ ကူးချခြင်း ဖြစ်သည်ဟူသော စွတ်စွဲချက် မခိုင်လုံကြောင်းနှင့် မိုက်မဲရာကျကြောင်း ငြင်းဆိုချက် (၄) ချက်ကိုဖေါ်ပြပါ။
၇။ အပျိုကညာ ၀မ်းမှ မွေးဖွားတော်မူကြောင်း အထောက်အထားပြရန် အဘယ်ကြောင့်ပရောဖက်တို့၏ဟော ပြောချက်များကိုအားထားရပါသနည်း။
၈။ အဆိုခိုင်မာစေရန်အတွက် ပရောဖက်များ၏ကြိုတင်ဟောပြောချက်များကို နောက်မှထပ်ဖြည့်ခြင်း မဟုတ်ကြောင်း အထောက်အထား(၃) ခုဖေါ်ပြပါ။
၉။ ခရစ်တော်သည် ကမ္ဘာ မတည်မရှိမီ ရှိနှင့်တော်မူကြောင်း အထောက်အထား ကျမ်းချက်အနည်းဆုံး(၄) ချက် ကိုဖေါ်ပြပါ။
၁၀။ ခရစ်တော်သည် မိမိလူမျိုး မိမိလူတို့ထံသို့ မိမိဆန္ဒ အလိုတော်နှင့်အညီ ကြွလာတော်မူကြောင်း အထောက်အထား ကျမ်းချက် (၄) ချက်ကိုဖေါ်ပြပါ။
၁၁။ ခမည်းတော်ဘုရားသခင်သည် ကိုယ်တော်အား ဤလောကသို့စေလွှတ်တော်မူကြောင်း အထောက်အထားကျမ်းပိုဒ် (၃)ပိုဒ်ကိုဖော်ပြပါ။
၁၂။ ခရစ်တော်ကမ္ဘာမတည်မရှိမှီရှိနေတော်မူခြင်းနှင့် ဘုရားဖြစ်တော်မူခြင်းကြောင့် ခရစ်တော်အတွက် ထူးခြားသော မွေးဖွားခြင်းအဘယ်ကြောင့်လိုအပ်ပါသနည်း။
၁၃။ ခရစ်တော်နှင့် ပတ်သက်၍ ပြောနိုင်ပါလျက် အခြားသောဘာသာရေးဖော်ထုတ်သူများနှင့် ပတ်သက်၍ မပြောနိုင်သောအရာသည် မည်သည့်အရာနည်း။
၁၄။ အပျိုကညာဝမ်းမှ မွေးဖွားခြင်း၏ နောက်ဆုံးသက်သေနှင့် အထောက်အထားများအနက် (၄)ခုကို ဖော်ပြပါ။
၁၅။ အပျိုကညာဝမ်းမှ မွေးဖွားတော်မူခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏စိတ်ချစွာခံစားမှုဖော်ကျူးသော စာပိုဒ်တစ်ပိုဒ်ရေးပါ။
မှတ်ချက်။ စာပေးစာယူ၊ အဝေးသင်ဒီပလိုမာကျမ်းစာသင်ခန်းစာများ (အခန်း ၆) ဖြစ်ပါသည်။